I-Lotus Suite iimayile eziyi-2 ukusuka eSFX Downtown - I-Airbnb
I-Lotus Suite iimayile eziyi-2 ukusuka eSFX Downtown
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMariana
Shiya izihlangu zakho kunye namaxhala phaya kwaye uzive usekhaya!
Isiqwengana sethu somhlaba sikwiBairro Santa Cruz, kumgama nje oyi-3km ukusuka kumbindi weSão Francisco Xavier. I-suite isecaleni kwendlu, kodwa inokufikelela okwahlukileyo kunye nabo bonke ubumfihlo obuyimfuneko. Igumbi lilula, kodwa lakhiwe ngononophelo olukhulu ukuze iindwendwe zethu zibe namava ahlaziyayo ngendalo.
IZILUMKISO kunye NENKCAZELO yokunceda kwiCOVID-19
Siphinda sivule iintsuku zethu zokubuka iindwendwe emva kwexesha lokuhlaliswa wedwa, silandela amacebiso nemiqathango ebalulekileyo:
- Njengoko kuvunyelwene ngako ngexesha lokubhalisa xa ufika, siza kusishiya izitshixo zegumbi lokulala kwindawo yokwamkela iindwendwe. Indlu yethu isecaleni, kwaye
siza kulandela inkcubeko yencoko ngaphakathi kocingo ;)
- Sicela iindwendwe ukuba zize nezinto zazo zokuhlamba (iitawuli zokuhlamba, itawuli yezandla neetawuli zaphantsi);
- Sinezinto zokondlula ibhedi neengubo;
- Ngexesha lokuphuma, sicela ukuba inkunkuma ibekwe kwimigqomo yenkunkuma ephilayo (inkunkuma kwigumbi lokuhlambela, inkunkuma yokutya) kunye nemigqomo yenkunkuma enokuphinda isetyenziswe (iphepha, iplastiki, iglasi, i-Styrofoam, njl.) ephambi kwezitepsi;
“Ngexesha elingaziwayo asikuniki isidlo sakusasa.
Silandela amacebiso okucoca ibe sikhangele phambili kwindawo epholileyo nepholileyo. Siza kuhlala sikhona ukuze sikuncede.
Kwaye wamkelekile kakhulu!
- --price} - ----- Ejikelezwe yimithi yendalo yehlathi leAtlantiki, eli gumbi lilungele abantu abathandanayo abakhangela ukuzola nokuzola ecaleni kwezilwanyana neentaba zaseMantiqueira. Ukusuka kwibhalkhoni yegumbi uyakwazi ukuphumla kwi-hammock ukuya kumculo womlambo ogqitha kwiimitha ezimbalwa ukusuka egumbini. Ii-squirrels kunye neentaka ezahlukahlukeneyo zisoloko zijikelezile. Ukuba unqwenela ukuhlamba umphefumlo wakho kwibhafu enengxangxasi emnandi, eli gumbi likwiimitha eziyi-200 ukusuka ePedro David Waterfall, enye yezona zinto zinomtsalane kwesi sixeko.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle lixhotyiswe ngebhedi elala abantu ababini, itafile encinci enezitulo ezimbini, iTV ene-input ne-DVD player, i-intanethi ye- optic, i-minibar, ukufikelela kumgangatho weplanga one-hammock, igumbi lokuhlambela elinendawo yokufudumeza igesi kunye nendawo yokupaka evulekileyo. Uza kunikwa ilineni yebhedi.
Yonwabela ukuhlala kwakho ukuze uphumle uze uphumle.
Siya kuhlala sikhona ukuze sinamkele kwaye sinamkele. Iindwendwe zinendawo yazo yabucala kwaye zinokuziva zisekhaya. Kodwa ukuba uziva ufuna ukuba nencoko entle malunga nomlilo wenkampu, siya kuhlala sivulekile kwaye sizimisele ukunceda ngayo nantoni na.
Siya kuhlala sikhona ukuze sinamkele kwaye sinamkele. Iindwendwe zinendawo yazo yabucala kwaye zinokuziva zisekhaya. Kodwa ukuba uziva ufuna ukuba nencoko entle malunga nomlilo wen…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- São francisco Xavier